Bogga ugu weyn / Tilmaamaha qasabada / Faallooyinka qasabadda Delta: Tilmaamaha Iibsiga ee 2021 ee qasabadaha Delta jikada
2021 / 05 / 08 QoondayntaTilmaamaha qasabada 3495 0
Markaad raadineyso qasabadaha saxda ah, tayada waa tixgelin muhiim ah maxaa yeelay cidina ma rabto inay bedesho qasabadooda dhowrkii sanaba mar. Hal hoggaamiye ayaa ka sarreeya inta kale marka laga hadlayo tayada: Delta qasabada.
Delta Qasabadaha ayaa had iyo jeer safka hore kaga jira hal-abuurnimada qasabadda. Waxay soo saareen tikniyoolajiyada sida Touch2O, dareemayaal taabasho oo qasabadda fura oo damiya. Iyagu sidoo kale waa indheer garad ka dambeeya MagnaTite Docking, kaas oo adeegsada birlab si uu u sugo madaxa qasabadda marka aadan isticmaaleyn tuubada la dheereeyey.
Delta qasabad qasabad Jikada
Si aad uhesho midka ugufiican jikadaada, fiiri kuwan Dib u eegista Delta Faucet loogu talagalay qasnadaha jikada ee Delta ee 2021.
Tuubada jikada saxda ah waxay ubaahantahay dhamaan astaamaha aad rabto adigoon qarash gareeyn miisaaniyadaada. Dheelitirka u dhexeeya qiimaha iyo muuqaalada anfacaya, ka Essa jiido Down jikada qasabad 9113-AR-DST wuxuu kahelaa meesha ugu sareysa liiska qasabadaha jikada.
ShieldSpray ™ Teknolojiyada
Buufiyo, qulquli, iyo ShieldSpray ™ hawlaha
Leland waxay bixisaa astaamo isku mid ah sida Essa laakiin marka lagu daro ShieldSpray ™ Technology. Abuuritaanka Delta ee hal-abuurnimada ah wuxuu ku siinayaa durdur awood leh adoo yareynaya firidhka. Qiyaas inaad maydho suxuunta adigoon sidoo kale nadiifinin qashinka ka dib.
Kuwa iyagu doorbidaya muuqaal ka casriyeysan qasabadooda,Taansiigga Hal-Gacan ee Trinsic 9159-AR-D waa doorasho weyn. Waxay leedahay dhammaan astaamaha iyo kalsoonida Delta Faucet kasta oo leh qaab jilicsan.
Lenta waxay leedahay dhammaan astaamaha caadiga ah ee aad ka filayso Delta Faucet: waalka tayada-sare leh, InnoFlex PEX khadadka saadka, iyo MagnaTite Docking. Tikniyoolajiyadda caanka ah ee 'ShieldSpray ™' iyo tuubbada rogrogmi karta ayaa ka dhigaysa mid wax badan laga qaban karo oo ku saabsan shaqo kasta.
5. Kate Tuubbada Kali-Gacan-qabsiga ah
Haddii aad rabto qasabad leh naqshad yar oo haddana ku habboon jikadaada weyn, waxaad ka heshay taam ku habboon Kate Hal-Gacan-qabsi Jikada Tuubada Siigada. Waa naqshad casri ah oo gaar ah oo jikadaada ka dhigi doonta mid dhalaalaysa.
Iswaafajinta mashiinka saabuunta
Buufinta hoos-u-buufinta leh 'MagnaTite Docking'
Taabo Nadiifi godadka buufin
Delta tiknoolajiyadda qufulka dheemman ee Delta
Damaanad qaadka nolosha oo xadidan
Waxaa laga heli karaa chrome ama dhameystir aan lahayn
Muuqaalka ugu caansan ee Kate waa naqshaddiisa gaarka ah. Waxay ku habboon tahay rakibo saddex-god ah laakiin aan ku xidhnayn qasabad iyo laba gacan. Waxay ka muuqataa qasabadda bartamaha iyada oo leh hal lever oo midigta ka qabanaysa dhinaca midig si loo xakameeyo heerkulka iyo socodka biyaha labadaba, oo ay weheliso saabuunta wax lagu kala gooyo ee dhinaca bidix.
Tuubada lafteedu waxay leedahay muuqaal jilicsan, heer hoose ah, muuqaal casri ah halka gacanta iyo saabuunta mashiinka lagu shubo ay ku darayaan qiyaas qaab dhaqameed ah. Tani waxay ka dhigeysaa mid iskufilan oo ku filan guri kasta.
6. Essa Tuubada Hal-Gacan-Bar-Diyaarinta
Essa-ka: qasabada Delta aad ayey u fiicnaayeen laba jeer ayey ka dhigeen. Tani Essa Hal-Qabashada Bar-Diyaarinta Tuubada 9913-AR-DST wuxuu la mid yahay qaabka Essa ee aan ku dhiganay lambarka koowaad liiskayaga, laakiin leh qiime yar oo ka hooseeya.
7. Windemere qasabad laba-qabad leh
Haddii aad haysatid jiko dhaqameed quruxsan oo raaxo leh, waxay ku habboon tahay oo keliya in qasabaddaadu u dhigantaa. Xarrago weyn oo ka mid ah Windemere Tuubada Laba-Qabashada waa taam ku habboon.
Qaanso qoto dheer oo leh dhaqdhaqaaq qulqulaya 360-degree
Waxaa lagu heli karaa chrome, saliid naxaas ah, iyo waxyaabo aan dhammeystirneyn
Tuunbada Windemere waxay leedahay muuqaal muuqaal ahaan runtii muuqaal leh. Iyada oo leh qaanso sare, qaabeyn afar god ah, iyo salka la taaban karo, waxay leedahay jaangooyooyin ku habboon jikada weyn, raaxada leh. Dhamaan xarragadaas waxay ku yimaadaan qiime la yaab leh oo la awoodi karo, in kastoo.
Kaliya maaha cabbirka Windemere inuu ka dhigo mid ku habboon, laakiin nadaafadda ayaa fududaynaysa sidoo kale. Iyada oo leh qulqulo qulqulaya oo leh aragti qoto dheer oo qoto dheer, waxay ku habboon tahay nadiifinta suxuunta waaweyn, adag.
8. Isku-xidhka qasabadda jikada
Mid ka mid ah astaamaha lagu garto naqshadaha casriga ee gudaha waa nadiif, xarriiqyo fiiqan. Way cadahay in tani ay aasaas u ahayd Isku-xidhka qasabadda jikada, mid ka mid ah waxyaabaha Delta u gaarka ah uguna qurxoon qasabadaha jikada.
Waxqabadka hal-gacan ah
Hal-god ku rakibid
Buufiyaha buufiska magnetic
Milkiileyaasha guryaha ee raba in la hagaajiyo, naqshad jilicsan oo ka dhigaysa qasabadooda inay u ekaato bandhig ka socda Guggenheim, qaabka Isgoysku waa doorashada ugu habboon. Dabcan, muuqaalka casriga ee casriga ahi ma ahan hantida kaliya ee qasabadani leedahay. Ka shaqeynteeda ayaa si qurux badan u nugul sidoo kale.
Qasabadani waxay gaadhay in kabadan 15 inji, taas oo ka dhigaysa mid ku habboon dheriyada waaweyn iyo suxuunta. Isgoyska ayaa sidoo kale waxtar u leh labada dalool iyo qaabeynta seddex dalool, maadaama tubbada lafteedu ay kaliya u baahan tahay hal dalool laakiin waxay bixisaa saxan ikhtiyaar ah oo ikhtiyaar ah si loo daboolo godad dheeraad ah haddii loo baahdo.
9. Qasabadaha Hal-Gacmeed ee Charmaine
The Charmaine Tuubada Gacanta Keliya waa mid ka mid ah qasabadaha cusub ee Delta, taasina waxay u shaqeysaa faa'iidada macaamilka. Marka lagu daro muuqaalkiisa quruxda badan, tuubadaani waxaa ka buuxa waxyaabo casri ah oo ku habboon.
Charmaine waa hab farsamo sare oo jikadaada uga dhigeysa mid aad u sahlan. Dareemida taabashada waxay kuu ogolaaneysaa inaad ka fogaato inaad ku harto qas ama bakteeriyo ka hartay qasabada. Dhanka kale, qiyaasta heerkulka muuqda ayaa ku tusinaysa heerkulka tubbada si aadan ugu gubin biyaha kulul.
Iyada oo leh gaar ahaan heer sare, Charmaine ayaa sidoo kale ku habboon jikooyinka leh dheryo waaweyn, dheryaal lagu dubay, iyo saxanado si loo nadiifiyo. Buufiye-soo-jiidka hoos-u-dhiggu wuxuu ku darayaa isku-darka sida hab ku habboon oo awood leh oo lagu jebiyo burburka adag
10. Matoorada Hal-Gacan ee Jikada
The Mateo Fududeeyaha Jikada Hal-Gacan waa qasabad qaab-buuxa ah oo leh hal hanti midba midka kale. Inta udhaxeysa teknoolojiyada sare iyo naqshad, naqshad casri ah, qasabadani waxay ku habboon tahay wixii jikada casriga ah ama casriga ah.
Qulqulka 'TouchClean spray'
Waxaa laga heli karaa birta birta ah ee birta ah, birta birta ah ee birta ah, birta chrome, iyo dhammaadka maarta naxaasta
Tuubada Mateo waxay xambaarsan tahay dhinac walboo qasabadda casriga ah. Mid ka mid ah, naqshadeynta ayaa ah mid fudud oo toosan weli qurux badan, waxayna ku habboon tahay rakibidda hal gacan-qabsi. Halkaas, tuubada waxaa ka buuxa astaamo horumarsan si ay uga dhigto mid wax ku ool ah oo shaqeyneysa.
The ShieldSpray ™ Teknolojiyadda ayaa si aad ah uga dhex muuqda astaamahan. Abuuritaanka Delta ee hal abuurka leh wuxuu soo saaraa qulqul xoog leh oo biyo-yar-yar ama biyo-la'aan ah, oo kuu ogolaanaya inaad ka takhalusto qalalaasaha adag adigoon naftaada ama jikadaada ku dhex qoynin hawsha.
11. Addison Hal-Gacan-qabsi Jikada Tuubbo Siibiil
Dusha sare ee kalsoonida Delta Faucet, Addison waxaa ku jira ShieldSpray ™ Teknolojiyad si ay kuu siiso awood aad ku buufiso xoog leh buufin yar. Xajmiga caanka ah ee 10.34-inji wuxuu gaarayaa dhererkiisuna wuxuu ku siinayaa awood aad ku dhex mari karto dheriyo waaweyn iyo waxyaabo kale oo dhib badan saxanka dhexdiisa.
Hore:: Faallooyinka tubbada Delta Shower: 2021 Tilmaamaha Iibsiga ee Delta Delta Bulukeetooyinka Next: Faallooyinka tubbada Delta Shower: 2021 Tilmaamaha Iibsiga ee Delta Delta Bulukeetooyinka
2021 / 07 / 21 1206
2021 / 07 / 20 1141
2021 / 07 / 19 868
2021 / 05 / 13 5617